မေ့ဖျောက်ရခက်စေမယ့် အံ့ဩဖွယ် ထူးခြားလှပနေသော ပန်းပုရုပ် ၂၄ ခု - ONE DAILY MEDIA
မေ့ဖျောက်ရခက်စေမယ့် အံ့ဩဖွယ် ထူးခြားလှပနေသော ပန်းပုရုပ် ၂၄ ခု
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် တော့ မယုံနိုင်လောက်စရာ ပန်းပုရုပ်တစ်ခုကို မြင်ပြီး အံ့သြသွားဖူးကြပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး အလွန်လှပပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အရာတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပုံကို မယုံနိုင်အောင်ပါပဲ။ပန်းချီဆရာများသည် မြို့ပြမငြိမ်မသက်မှုများကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်း အတွေးအမြင်များကို သဟဇာတဖြစ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အနုပညာလောကထဲသို့ စိတ်နှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်စိတ်ကူးများထဲထိ heart ထိစေနိုင်သော ပန်းပုရုပ်ပေါင်း 24 ခုကို ပြသလိုပါတယ်
(၁) Nazar Bilyk မှ Kiev ရှိ Rain ဟုခေါ်သော အမြင့်6ပေရှိ ပန်းပုရုပ်တု
(၂) မွန်ဂိုလီးယားရှိ Genghis Khan ၏ အထိမ်းအမှတ်များနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး မြင်းစီးရုပ်တု
A post shared by Жамбал Хумаев (@zhambaleilo)
(၃) Luo Li Rong ၏ လက်တွေ့ဆန်သော ဤရုပ်တု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များက သင့်အား အံ့ဩစေမှာပါ
(၄) ဓားနတ်သမီးရုပ်တုကို ဓားတစ်သိန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လီဗာပူးလ်အင်္ဂလီကန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါတယ်
LIVERPOOL, ENGLAND – NOVEMBER 29: The Knife Angel sculpture is lowered into place outside Liverpool Anglican Cathedral on November 29, 2018 in Liverpool, England. The Alfie Bradley creation is made from 100,000 knives collected during police amnesties and aims to highlight the impact of knife crime. (Photo by Richard Martin-Roberts/Getty Images)
(၅) Richard Stainthorp ၏ ဝိုင်ယာကြိုးကို အသုံးပြု၍ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အကွေ့အကောက်များကို ပြန်လည်ဖန်တီးထားပုံ
(၆) Escape into Reality သည် ချက်ပန်းချီဆရာ၏ ဘိလပ်မြေ၊ သစ်သားနှင့် acrylic ဆေး တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပန်းချီ/ပန်းပုဖြစ်ပါတယ်
(၇) သစ်သားမဟုတ်ဘဲ ကြွေထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Christopher David White ၏ My Grain
A post shared by Christopher David White (@cwhite.ceramics)
(၈) Antony Gormley ၏ အင်္ဂလန်ရှိ Angel of the North သည် အမြင့် 20 မီတာ (66 ပေ) ရှိပြီး တောင်ပံများက 54 မီတာ (177 ပေ) ကျယ်ပါတယ်
(၉) ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Phu Quoc Island မှ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များ ဆွဲဆောင်ရာရုပ်တု
A post shared by * * (@angelinamiele)
(၁၀) ဗလင်စီယာ မြို့မှ PichiAvo ၏ ၂၆မီတာ(၈၃ပေ) အမြင့်ရှိသောရုပ်တု
(၁၁) သံကြိုးများဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော ဤရုပ်တုကို ရွှံ့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
(၁၂) အစွမ်းထက်ပြီး လက်တွေ့ကျသော ပန်းပုရုပ်များဟာ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ထင်မြင်ချက်များကို နှိုးဆွပေးနိုင်ပါတယ်
(၁၃) Malgorzata Chodakowska ဟာ အချိန်အကြာကြီး စွဲဆောင်နိုင်စေမည့် ထူးခြားသော ရေပန်းပုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
A post shared by Małgorzata Chodakowska (@malgorzata_chodakowska)
(၁၄) Bliss Dance ဟာ Marco Cochrane ၏ Bliss Project စီးရီးမှ ပထမဆုံး ပန်းပုဖြစ်ပါတယ်
A post shared by Deja Solis (@dejasolis)
(၁၅) Peter Demetz ၏ လက်တွေ့ဆန်သော သက်ရှိသစ်သားပန်းပုများ
(၁၆) Alexander Milov သည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပန်းပုရုပ်တုကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး လူတိုင်း၏အတွင်းစိတ်ကို ပြသခဲ့ပါတယ်
A post shared by Gyöngyi Katona (@gyongyi_katona)
(၁၇) The Hand of the Desert သည် ချီလီနိုင်ငံ Atacama သဲကန္တာရရှိ လက်တစ်ဖက်ပုံကြီးမားသော ပန်းပုရုပ်တုဖြစ်ပါတယ်။
(၁၈) Hague မှ စပိန်လူမျိုး ပညာရှင်တစ်ဦး၏ စာအုပ်ရုပ်ထု
(၁၉) ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင်ရှိ အဖြူ‌ရောင်ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းမှ ရုပ်တုများ
(၂၀) Seo Young Deok ဟာ သူ၏ အံ့သြဖွယ်ရာ ပန်းပုများအတွက် အထူးနည်းလမ်းဖြင့် ချည်ထားသော စက်ဘီးချိန်းကြိုးများကို အသုံးပြုပါတယ်
A post shared by Seo Young Deok 서영덕 (@youngdeok_seo)
(၂၁) Yuichi Ikehata ၏ Surreal composition
A post shared by Yuichi Ikehata (@kakuunohito)
(၂၂) အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ Dublin ရှိ အောက်မေ့ဖွယ် Great Famine
(၂၃) ဒီငါးကြီးတွေကို ပလတ်စတစ်ဘူးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး Rio de Janeiro ရှိ Botafogo ကမ်းခြေမှာ တည်ရှိပါတယ်
(၂၄) Lorenzo Quinn ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆိုင်ရာ ထောက်ပြမှု
A post shared by @jeremycorsini
မည်သည့်ရုပ်ထုကို သင့်မျက်စိဖြင့် အပြင်မှာ မြင်လိုပါသလဲ ။ အောက်တွင် သင့်အကြိုက်ဆုံးများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပြီး ဤဆောင်းပါးကို သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေပေးပါ
အံ့ဖွယ် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော အသီးအနှံ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၂၃ မျိုး
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ကမ္ဘာကြီး၏သဘာဝဓာတ်ပုံ (၁၄) ပုံ